China Ike n'elu mpịachi mmadụ anọ ụlọ ụlọikwuu ụlọ ọrụ na suppliers | Yuancheng
Ihe: ABS + ASA + ọlaọcha ntekwasa Oxford ákwà + polyester owu ákwà + aluminum tube + pearl owu + ogbo na mpe mpe akwa + ojii polyester anwụnta
adaba ka mpịachi / kwadebe na abụọ ladders, 3-4 ndị mmadụ na-eji.
* Matress: 4cm elu EPE ụfụfụ + 3cm elu Pu ụfụfụ + ihe mkpuchi owu
1. Oghere na mmechi akpaka site na ịmalite mmiri;
2. A na-ejikọta ubube telescopic na tent ụlọ, na ntinye na ibudata usoro dị mfe ma dị mma;
3. Ihe ndina ahụ na-apịaji na etiti, nke kwesịrị ekwesị maka SUV buru ibu na nnukwu;
5. Stitch E nwere ọgwụgwọ mmiri n’ebe niile.
6. Enwere akpa akpụkpọ ụkwụ abụọ nwere ike iwepu n'akụkụ abụọ nke ụlọikwuu ahụ;
7. Enwere ike iji okpukpu ike dị n'elu dị ka mmiri ozuzo na-enweghị mkpuchi mmiri ozuzo dị iche, nke dị mfe ịrụ ọrụ.
Ihe mkpuchi dị n’elu bụ shei siri ike, ọ na-adaba adaba iji gbagoo / kwadebe ya na ubube abụọ, nchekwa ma nwee ntụkwasị obi / saa mbara, ma nwee ike ịnabata mmadụ 3-4.
Nke gara aga: Ike n'elu akpaka ụgbọ ala ụlọ tent / ike n'elu ntuziaka ụgbọ ala ụlọ ụlọikwuu
Osote: Ike n'elu mpịachi ụgbọ ala ụlọ tent
Carlọ Ulo Ugbo Ala, Mako Car oyi, 12v Car Igwe nju oyi oyi, Obere igwe oyi 12v, Kpuchie N'okpuru Car, Car Wine oyi,